सफलताका सूत्र ; धैर्य शक्तिशाली योद्धा हो
March 16, 2019 12:49 pm
लियो टल्स्टोयले भनेका छन्, ‘धैर्य र समय दुई एकदमै शक्तिशाली योद्धा हुन्।’ यो भनाइले धैर्यलाई समय सरह नै दिएकाले यसको महत्व पनि सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। मानिस जतिसुकै विद्वान, बलवान्, धनवान् र सीपवान् भएको होस् तर उसमा धैर्य छैन भने उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। शास्त्रमा पनि लेखिएको छ कि, मानिसमा धैर्य चाहिन्छ। धैर्य गर्न नसक्ने मानिस जीवनमा सफल हुन सक्दैनन्। धैर्य सफलताका लागि नभई नहुने गुण हो। १९६० मा वाल्टर मिस्चेलले १२ वर्षदेखि १३ वर्षका एक सय जना बच्चासँग एउटा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनअनुसार मिस्चेलले बच्चाहरूलाई एउटा कोठामा राखे र सबैलाई एउटा मार्सम्यालो (मिठाई) दिएर र भने, ‘तिमीहरूले यो मार्सम्यालो १५ मिनेटसम्म खाएनौ भने क्यान्डी र चकलेट पाउनेछौं।’ १५ मिनेट समय बितेपछि एक सय जना बच्चामध्ये ७ जनाले मार्सम्यालो खाइसकेको पाउँछन् भने ८२ जना बच्चाहरूले आफ्नो र साथीहरूको हातमा रहेको मार्सम्यालोबारे मेरो ठूलो, मेरो सेतो, उसको सानो भन्दै कुरा गरिरहेको पाउँछन्। बाँकी ११ बच्चा जसले मिस्चेलको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुने र धैर्य राखे। उनीहरूले आफ्नो मार्सम्यालोलाई छेउमा राखेर आआफ्नो काममा व्यस्त भए।
३० वर्षपछि फेरि तिनै एक सय जना माथि फेरि अर्को अध्ययन गरियो। अध्ययन अनुसार ती सात बच्चा जसले मार्सम्यालो १५ मिनेट अगाडि नै खाएका थिए, ती कोही अपराधी भएका थिए भने कुनै भिखारी त कुनै जेलमा थिए। वाल्टर मिस्चेलको अध्ययनबाट पनि मानिसको सफलतामा धैर्यको कति महत्व हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। १५ मिनेट पनि धैर्य गर्न नसकेको बच्चापछि ठूलो भएपछि अपराधी तथा भिखारी भएका थिए भने कुनै जेलमा थिए। जुन बच्चाहरूले १५ मिनेट धैर्य त गरे तर मार्सम्यालोको मोह त्याग्न नसकी हातैमा राखेका थिए, ती बच्चाहरू औसत जिन्दगी बिताएका थिए। जुन बच्चाहरू १५ मिनेट धैर्य पनि गरे र मार्सम्यालोलाई वास्तै नगरी भुइँमा राखी आ–आफ्नो कार्यमा व्यस्त थिए, तिनीहरू जिन्दगी मा आ–आफ्ना क्षेत्रमा सफल व्यक्तिहरू बनेका थिए। यो अध्ययनले के प्रस्ट पार्छ भने, जति धेरै धैर्य, त्यति नै धेरै सफलता प्राप्त हुन्छ।
कुनै पनि कार्यको फल प्राप्त गर्न एक निश्चित अवधि आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न उक्त क्षेत्रमा एकचित्त भएर मेहनत गर्नुपर्छ। सोका लागि धैर्य आवश्यक हुन्छ। धैर्य राख्न मानिसले आफ्नो विवेकको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। मानिसको जीवनमा विभिन्न बाधाहरू आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, जुन मानिसले आफ्नो विवेकको सही उपयोग गरेर धैर्यका साथ अगाडि बढ्छ, ऊ सफल हुन्छ भने जसले विवेकको सही सदुपयोग गर्न नसकी धैर्य गुमाउँछ, ऊ असफल हुन्छ। यो संसारमा सिंह, बाघ, हात्तीलगायत धेरै जनावर मानिसभन्दा धेरै शक्तिशाली छन्। तर, मानिसमात्रै यस्तो प्राणी हो, जसले आफ्नो विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गरी धैर्य कायम राखेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ। एक व्यक्ति भगवान्को दर्शन गर्न ठूलो पहाड चढेर मन्दिरमा गई भक्ति गर्न थाल्यो।
केही दिनपछि व्यक्तिको भक्तिदेखि प्रसन्न भई भगवान्ले दर्शन दिनुभयो। भगवान्को दर्शन पाएर व्यक्ति खुसी भयो, अनि भगवान्लाई प्रश्न र्गयो, ‘भगवान्, दस वर्ष तपाईंका लागि कति समय हो ? ’ भगवान्ले भन्नुभयो, ‘केवल एक मिनेट बराबर।’ व्यक्तिले फेरि सोध्यो, ‘एक करोड रुपैयाँ तपाईंका लागि कति बराबर हो ? ’ भगवान्ले भन्नुभयो, ‘सिर्फ एक रुपैयाँ बराबर।’ व्यक्तिले भन्यो, ‘त्यसो भए मलाई वरदानस्वरूप एक रुपैयाँ दिनुहोस्।’ भगवान्ले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, ‘हुन्छ, सिर्फ एक मिनेट पर्ख है।’ भगवान्को कुरा सुनेर व्यक्ति हिस्स र्पयो। तर उसले धैर्य गर्न छाडेन। अन्ततः भगवान्ले भनेको एक मिनेट बराबरको १० वर्षमा ऊ करोडपति भयो।
धैर्य्बिना मानिसले कुनै पनि सफलता सजिलै हात पार्न सक्दैन। कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न एउटा निश्चित अवधिसम्म त धैर्य राख्नै पर्छ। धैर्य राख्न सक्ने मानिस निराश बन्दैन र निरन्तर मेहनतले एक दिन अवश्य पनि सफल हुन्छ। संसारभर २० हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट खोल्न सफल म्याकडोनाल्ड पछिको संसारको दोस्रो ठूलो फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट चेनका संस्थापक कर्नल स्यान्डर्सले आफूले पकाएको केन्टकी फ्राइड चिकन बेच्न एक हजार नौ वटा रेस्टुरेन्टको ढोका ढक्ढक्याएपछि मात्र एउटा रेस्टुरेन्टले पहिलो अर्डर लिएको थियो। ६२ वर्षका कर्नल स्यान्डर्सले पटकपटक रेस्टुरेन्टबाट अर्डर लिन नकार्दा पनि हार नखाई मनमा धैर्य लिई हिम्मतका साथ एकपछि अर्काे रेस्टुरेन्टको ढोका ढक्ढक्याइरहे। एक दिन उनको धैर्यको नतिजास्वरूप उनको केन्टकी फ्राइड चिकेन विश्वविख्यात भयो र उनी संसारकै खर्बपतिमा गनिए। मानिसले जीवनमा कुनै काम गर्न वा नगर्न, कुनै कामलाई निरन्तरता दिन वा नदिन धैर्यले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। उसलाई असल बानी बसाल्न वा खराब बानी छोड्न धैर्यको ठूलो खाँचो हुन्छ। जस्तै, नियमित शारीरिक व्यायम गर्न, नियमित अध्ययन गर्न, मादक पदार्थलगायत सेवनहरू छोड्न आदि। त्यसरी नै मानिसले अन्य कुनै पनि असल कार्य गर्न केही निश्चित अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि धैर्यको ठूलो आवश्यकता पर्छ।
हिन्दीमा एउटा कविता छ, सबर कर बन्दे !! मुसीबत के दिन भि गुजर जाएंगे, हंसी उडाने वालों के भि होस उड जाएंगे।। कवितामा भनिएजस्तै हामीले धैर्य राख्यौं भने हाम्रा असफलताका दिनहरू बित्नेछन् र हामीलाई जिस्क्याउने, गिज्याउने व्यक्तिहरूले दंग पर्दै हामीबाट पाठ सिक्नेछन्। अध्ययनबाट नै पुष्टि भएको छ कि, जति ठूलो धैर्य, त्यति ठूलो सफलता। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूले पनि धैर्य राख्नुपर्छ भन्ने सिकाइरहेका छन्। संसारका सफल व्यक्तिहरूबाट पनि धैर्य राख्नुपर्छ भन्ने उदाहरण सिक्न सकिन्छ। सफलता प्राप्त गर्नुछ भने धैर्य राख्नु अति आवश्यकता छ। धैर्य शक्तिशाली योद्धा हो। शक्तिशाली योद्धालाई साथ छोड्न नदिऔं। (मल्ल ओम डेभलपमेन्ट बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)